Njengoba abantu nethuba ukwakha izakhiwo ezikhotha amafu, abakwenzayo kunzima kakhulu. Architects kuwo wonke amazwe abafuna ukuklama nokwakha isakhiwo esasizoba ngobugebengu wonke amarekhodi. Omunye lezi zidlakela iyona Shanghai eWorld Financial Center. Ibizwa nangokuthi "isimangaliso China." Futhi lokhu kuyiqiniso, ngoba unganakile lesi sithombe sibonisa ubuhle phezulu kanye isici yobuhle kuyasiza kunalokho enkulu ukubukeka egcwele umuzi.
Shanghai eWorld Financial Center (SWFC) - kuyinto isakhiwo sesine ezinde kunazo zonke emhlabeni, onikeza indlela legendary Burj Khalifa Dubai, Abraj Al Bait eMecca futhi Taipei eTaiwan. Futhi uzinake ukuthi China kakhulu liyasondela ukwakhiwa ka namabhilidi. Futhi manje-ke ungakha umholi ukuncintisana okunempilo ngalolu daba - United Arab Emirates.
Design kanye nomlando ukwakhiwa SWFC
Shanghai eWorld Financial Center, amaShayina wakhela e Ngasekupheleni kwehlobo lika-1997. Nokho, ngonyaka ozayo ukwakhiwa phezulu uye ehlile ngenxa kunezinkinga zemali. Ngakho, iphrojekthi yaqhubeka iminyaka 10. It uqalisiwe uxhaso esebenzayo kuphela ngo-2003. Khona-ke saqhubeka umhlobiso ingaphakathi, okwakuthatha ezingu-12. Ekuqaleni kwakuhlelwe ukwakhiwa kwebhilidi imitha-460 ngesikhathi 94 izibuya. Kodwa ngo-2003, i-olubuyekeziwe futhi kushintshwe labo izinombolo 492 kanye 101 ngokulandelana.
Ngo-2005 waphinda ingachibiyela uhlelo ngaphambilini athuthukile ukwakha. Kulokhu-ke wafika "ifasitela" ku phezulu phezulu. Manje, njengoba ungabona, it has a ukuma trapezoid, kodwa wayedabuka round, 46 amamitha amabili ububanzi. On the ebukezwe iphrojekthi ngalesi sikhathi, waphikelela amaShayina ngokwabo, kuhlanganise IMeya Shanghai. Running kancane ngaphambi, siphawula ukuthi ukwakha phezulu - Shanghai eWorld Financial Center - inkampani ukwakhiwa Japanese Mori Isakhiwo Corporation. Futhi kwaba uhlobo wokukhumbula resumption kobungane nobudlelwane phakathi kwalawa mazwe amabili. Nokho imeya Shanghai lwakhipha round "ifasitela" on phezulu, ngoba ngangicabanga ukuthi kufana kwelanga - izimpawu of Japan. Yingakho-ke kwakudingekile ukuba alenze umumo trapezoid. Kulesi futhi wavumelana, ikakhulukazi kusukela ushintsho olunjalo waya inzuzo: kunciphise inani yephrojekthi yokuncishiswa ekwenzeni lokho okuhleliwe.
Inkampani wahlanganyela utshalomali, oyifunayo ukusetha Spire esakhiweni ukuze SWFC wakwazi ukushaya irekhodi basembhoshongweni Taiwanese. Nokho, unjiniyela umakhi is categorically wamlahla umqondo onjalo. Mhlawumbe bangamangala wayenezizathu yabo, kodwa abalobi ehlaziya yephrojekthi wathi ukuthi SWFC osayizi ngokwanele ekhona skyscraper amahle ngokubabazekayo. Shanghai eWorld Financial Center, usuku ukwakhiwa olungena on 2008, kulandela ukuphakama kuhlelwe ngaphambili kanye nenani storeys. endaweni yayo Imininingwane sangaphakathi cishe 378.000 square metres. Futhi, ifakwe 33 escalators futhi 31 ephezulu speed nezinqolobane zommbila.
Izici isikhungo sezimali futhi izindlela zokuphepha
Isici esiyinhloko le phezulu ukuthi zingamelana nokuzamazama komhlaba 7 amaphuzu. the amasheke ezidingekayo ziye kwenziwe, nokubhalisa leli qiniso. Ukuze uthuthukise ukuzinza isakhiwo, ngaphansi isisindo amaphuzu amabili sibhekile afakelwe ukushaqeka ezidayiswayo.
Njalo phansi weshumi nambili ka-Shanghai eWorld Financial Center - evikelwe. Okungukuthi 12, 24, 36 nokunye. Ziklanyelwe ukuvikela abantu ngesikhathi umlilo noma ezinye eziphuthumayo kuze kufike leso sikhathi asikafiki abatakuli. I phansi kwagcizelela uzimele ukhonkolo, isakhiwo sokuhlukanisa izigaba futhi beqiniseka ngamandla alo. Ukuqala kokusetshenziswa the project ikhuphukile kwenkululeko isivikelo esinjalo izindleko isamba skyscraper million 200 aseMelika. Kodwa uma ucabangela ukuthi ukuhlasela kwamaphekula e-New York lapho imibhoshongo angamawele ubhujiswe, iphutha lapho kwakhiwa SWFC, abaklami Japanese engasafuni ukuphinda isipiliyoni edabukisayo amaMelika sinqume ukuba zenze konke ezingakwenza ukuze avikele izakhamuzi ezinsongweni kungenzeka.
Futhi, kukhona zommbila efakwe ezinhlangothini ezaziphase isakhiwo, futhi izitezi ke futhi, ivikelwe. Esimeni kokuhlasela kwamaphekula noma ezinye izimo ezingalindelekile ezazingenza zisongele ukuphila kwabantu, bazokwazi ukusizakala konke lokhu insindiso yakho.
Shanghai eWorld Financial Center ayizange wathola isihloko Isakhiwo esiphakeme kunazo zonke emhlabeni. Kodwa kunenye impumelelo, hhayi ngaphansi ejabulisayo:
Isihloko "amafu Kuhle zomhlaba" (2008).
Umnikazi eliphakeme observation emphemeni emhlabeni. It etholakala ekhelini 472 amamitha ngaphezu komhlabathi.
"Lesi sakhiwo-ngikwazi ukuqala ': kungani siyidinga enjalo iwindi engavamile phezulu?
Shanghai eWorld Financial Center, obude yiso kanye lesi "ifasitela" kuyinto 492 m, edume ngokuthi "ngikwazi ukuqala 'ngoba ukuma yinqaba. Nokho, nabaqambi awuzami lokuphinda ikhophi izinto ekhishini. Eqinisweni, umgodi trapezoid kuyadingeka ukuze kuncishiswe emoyeni ukumelana.
Kuyini ngaphakathi SWFC?
Ingxenye komhlaba we-skyscraper esinezitezi ezintathu kuyinto igalaji yokupaka izimoto, futhi 1 kuya ku 5 uqimba has ezihlukahlukene ezitolo, isikhungo inkomfa kanye edilini izindawo. Kusukela amazinga 7 kuya 77 amahhovisi ukuthi ukuqasha Chinese eziningi (hhayi kuphela) izinkampani adumile ngokukhethekile izinhlobo ezahlukene imisebenzi. Ngokwesibonelo, Shanghai eWorld Financial Center (ngenhla) kuhlanganisa ehhovisi inkampani Tomson Group Ltd. Ngokuvamile, igama phezulu elikushoyo inhloso - nesakhiwo samahhovisi. Kodwa ngekhono "buhlanjululwe" nezinye izikhungo, okungahambisani konakalisa isakhiwo kusukela iphuzu Ngenxa nokuthuthukisa umuzi.
Kodwa maphakathi Kugcizelela kakhulu, ngakho-ke kuba khona phezulu omkhulu ehhotela ehloniphekayo ngaphansi kwegama Park Hyatt Shanghai. Uthatha eziningi ukushanela (79-93) futhi ine amakamelo 174 kanye Suites. Ngokuvamile, iqashe abantu engengaphansi kwengu-12 eziyinkulungwane. Lokhu abasebenzi isikhungo (Shanghai eWorld Financial Isiko & Media Centre), izitolo, izindawo zokudla, ehhotela, ezakhiweni izisebenzi, ukuphepha kanye nokunye.
Shanghai eWorld Financial Center: Ikheli
Skyscraper ise muzi main futhi fast kuphela elikhulayo China - Shanghai. Yakhiwa yamabhizinisi Pudong endaweni, emgwaqweni Shiji Dadao, 100. Kungenwa mahhala izakhamuzi nezivakashi, kodwa evakashele ezisekelweni kwehlwaya kungenzeka kuphela ngemuva ekukhokhweni ithikithi emnyango.
Vakashela SWFC, ukuba abone umuzi
Ithuba ngcono ukucabangela zonke charm Shanghai - ukukhuphuka omunye onezitezi observation Shanghai eWorld Financial Center. Linani selilonkhe lebantfu labange 3:
Esitezi 94 (423 m).
Esitezi 97 (439 m).
100 phansi - ibhuloho-Observatory, etholakala endaweni engamamitha 474 m ngaphezu komhlabathi.
Yonke indawo wacabanga izinyathelo ukuvikeleka okukhudlwana. Izindleko zokuvakashela amabanga kusuka yuan 120 kuya ku-150 ngaphezulu kuyanda, lo ezibizayo izobiza. Izingane kanye abadala abakushayi amanani. Amahora: 8:00 am kuya amahora 23.
Shanghai eWorld Financial Center: Izibuyekezo
Lokhu phezulu e China - indalo esiyingqayizivele yezakhiwo okungukuthi ukubukeka eliyingqayizivele futhi ezikhangayo, nakuba ayinayo uhlobo oluthile. Muhle nje enhle. Eqhubekela phambili kuhambela eChina, qiniseka ukuthi uvakashela Shanghai ekhuphukela phezulu eWorld Financial Center uphinde uhlole waya kuleli dolobha elikhulu enhle kanye nezakhiwo zayo eziphakeme eziningi, okuyinto abangazange okwamanje imtholile ukuphakama Shanghai eWorld Financial Center. Kodwa ngokuhlangana akha isithombe Akumangalisi enhle yedolobha elikhulu.
Izivakashi abaye kakade lapha, kutuswa ukuba uvakashele isikhungo e Shanghai e amahora kusihlwa, lapho uthola emnyama. Futhi ningasindisi imali ekhuphukela phezulu emphemeni observation. Isikhathi sihamba ngokushesha nge. Ithuba kabusha usivakashele asisakwazi, njengoba okuvelayo anikeza imibono panoramic, uzokhunjulwa elingapheli nalapho sezikhulile.